Filipina: novonjen’ny feso sy ny trozona ilay mpanarato · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2018 4:25 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, македонски, English
(Marihina fa tamin'ny 22 Desambra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nilaza ilay Filipiana mpanjono Ronnie Dabal fa novonjen'ny feso sy ny trozona izy rehefa nivadika tany an-dranomasina ny sambony tany Palawan, Filipina.
Nanoratra ity tantara ity tao amin'ny Philippine Daily Inquirer - gazety lehibe indrindra mpivoaka isan'andro ao Filipina i Redempto Anda. Ahoana ny fomba nanavotan'ireo feso sy ny trozona ilay mpanjono ? Toy izao ny tantara :
Vao marainan'ny 8 Desambra, raha nanarato lamàtra tao anaty rano nisafotofoto tao amin'ny Hoalan'i Puerto Princesa izy dia nisy rivotra nifofofofo tampoka ary namadika ny sambony. […] Niakatra teo ambonin'ny pôlistirenina izy ary niady tamin'ny onja nandritra ny ora maro. […] Vetivety dia tonga nitsaingoka azy ny fozan-dranomasina madinika (crustacé) antsoina ao an-toerana hoe “bugto”. […]
“Nanomboka kivy i Ronnie Dabal rehefa tonga ny alina ary nanodidina azy ny aizina. Nisy andiana feso teo amin'ny telopolo teo sy trozona miisa roa teo amin'ny folo metatra teo ny halavany tonga avy any amin'ny toerana tsy fantatra ary naka toerana nanohana azy tamin'ny sisiny roa.
Nilaza i Ronnie fa nitsotra teo ambonin'ny pôlistirenina izy, ary nifandimby nanosika moramora ilay karazana sambofiara keliny ho any amin'ny tany tamin'ny vombony ireo feso.
Nilaza i Ronnie Dabal fa tsy nahatsiarotena izy raha nanosika azy moramora ireo feso ary nifoha teny amoron-dranomasin'ny tanànakelin'i Barangay tao Luzviminda, izay namonjen'ireo mponina azy .
Ilay mpanarato izay resahana eto ihany koa dia “mpitsondodia feso”.
Niaiky ilay bilaogera Ang Kape Ni LaTtEX fa liana tamin'ny tantaran'ity mpanjono ity. Nahita porofo izy ho fanohanana ny fizahantany ara-tontolo iainana any Filipina :
” Mivoaka an-dranomasina vao maraina ireo mpitsondodia feso – izay matetika vadin'asa ho an'ny mpanjono ao Puerto Princesa – mba hizaha ny andiana feso lehibe ary milaza amin'ny tompon'ny sambo ny toerana misy azy ireo izay mikarakara fitsangatsanganana an-tsambo ho an'ny mpizaha tany (mifampiresaka amin'ny alalan'ny SMS izy ireo, inona ny ankoatra izay ?).
“Mazava ho azy, mampianatra antsika lesona maro izay tokony homen-danja tanteraka ny fomba fjery mahafinaritra momba ny fizahantany ara-tontolo iainana any Filipina. Ny fiarovan'ny mponina ao an-toerana mafy ny asa fivelomany no voalohany indrindra amin'izany lesona izany – raha toa ka ataonao ho asa fivelomany ny tontolo iainana dia miaro izany araka izay azony atao izy ireo. Manaraka ny sisa ankoatra izay: ny fanajana ny lalàna, ny fandaminana ny fanaraha-maso, ary eny fa na dia ny fanovana tanteraka ny toe-tsaina manoloana ny fako aza. “
Saingy misalasala momba ity tantaran'ilay mpanarato ity ilay bilaogera DJB. Hoy izy raha nanazava :
“Désolé, mais ça m'a l'air d'un conte de fées pour adultes. Ou d'une parabole qui prêche pour un Homo sapiens meilleur et plus doux. S'il s'agissait d'un pêcheur analphabète, et non d'un des “pisteurs de dauphins” du maire de la ville de Puerto Princesa, Ed Hagedorn, l'histoire serait celle d'un quasi miracle. Mais telle qu'elle est, et même si j'ai presque honte de l'avouer, je suis SCEPTIQUE sur sa véracité ! Je ne sais pas pourquoi, mais cela a été ma première impression quand j'ai lu l'article de l’Inquirer aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de détails…Hmmm…
“Miala tsiny aho, fa toa tahaka ny angano izany raha ho an'ny olon-dehibe. Na toy ny fanoharana iray mitory ny karazan'olombelona tsara sy malefaka kokoa. Tena mahagaga tokoa io tantara io raha toa ka mpanarato tsy mahay mamaky teny sy manoratra no noresahana teto, fa tsy ny iray tamin'ireo “mpitsongodia feso” an'ny ben'ny tanànan'i Puerto Princesa , Ed Hagedorn. Kanefa noho izany, ary na dia somary menatra aza aho ny hilaza azy, dia misalasala aho amin'ny fahamarinany! Tsy fantatro ny antony, fa izay no zavatra tsapako voalohany rehefa namaky ny lahatsoratra tao amin'ny Inquirer aho androany. Tena maro ny antsipiriany ahitana izany… Hmmm …
” Tsy nahita zava-tranga toy izany mihitsy aho tany taloha rehefa nanao fikarohana. Eny e, tsy nijery afa-tsy tao amin'ny Google aho aloha.
“Ankoatra izany, tsy nahalala aho fa afaka milomano hatreny ambony ranomasina ny fozan-dranomasina (” bugto “) mba hihinana ireo mpanarato. Angamba eny amoron-dranomasina no mety hisy izany, voalaza fa nitsingevana tamin'ny silaka pôlistirenina anefa izy? Tsy maintsy ho karazana bugto hafa kely angamba izany, foza sady mivelona any anaty sy ivelan'ny ranomasina ary mihinan'olona, na zavatra mitovitovy amin'izany. “
“Namonjy olombelona iray ny feso miisa telopolo sy trozona miisa roa. Tena mety tsara ho an'ny lohatenim-baovao izany. “
Any amin'ny morontsiraka andrefan'i Filipina no misy an'i Palawan ( jereo ny sarintany Google Map). Anisan'ny faritra Luzon izy izay toerana malaza ho an'ny fizahantany ary indrindra indrindra ny maha harena voajanahary azy no tena zava-dehibe:
“L'île qui donne son nom à la province de Palawan a été déclarée sanctuaire naturel mondial et pour de bonnes raisons. Elle est enveloppée de forêt primaires, offre des sites de plongée remarquables, des montagnes majestueuses, des cavernes primitives et des plages vierges. L'île est ceinte d'une barrière de corail qui grouille d'une vie marine très colorée. Elle s'enorgueillit d'une flore et d'une faune rare, comme le pangolin [en français] et la mousedeer – ou chevrotain – qui ne se trouvent nulle part ailleurs.
” Nambara fa toerana masina voajanahary manerantany ilay nosy faritanin'i Palawan noho ny antony maro. Rakotra ala mando izy , ahitana toerana filomanosana miavaka, tendrombohitra mahafinaritra, zohy fahagola ary tora-pasika madio. Voahodidin'ny sakana haran-dranomasina izay miravaka fiainana an-dranomasina maro samihafa ilay nosy. Mirehareha amin'ny zavamaniry sy ny biby tsy fahita firy ao aminy izy, toy ny pangolin sy ny mousedeer – na chevrotain – izay tsy fahita na aiza na aiza.
“Anisan'ny tsara indrindra erantany ny rano ao Palawan, tsy ho an'ny ankilentika an-dranomasina fotsiny ihany fa ho an'ny fanjonoana ihany koa. Paradisa ho an'ny mpanao ankilentika izany, miaraka amin'ny vatoharan-drano mirefy kilaometatra maro sy ny vatohara maroloko manodidina ny moron-dranomasina sy ny rano manankarena fiainan-dranomasina.